२०७५ सालमा देशले गुमायो यस्ता हस्तीहरु | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ५ बिहीबार, ०७:२४
२०७५ चैत्र ३० गते प्रकाशित, l २२:०५
चैत ३०, काठमाण्डौ । वर्ष २०७५ मा देशले केही यस्ता व्यक्ति गुमायो, जसले राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । केही व्यक्ति दुर्घटनामा परेर अकालमै निधन भए भने केही कालगतिले मृत्यवरण गर्न पुगे ।
२०७५ सालको असारमा वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भयो । लामो समय लाखौँ नागरिकको उपचार गरेर निको बनाएका देवबकोटा आफै भने क्यान्सरका कारण संसार छोड्नुपर्यो । पित्तनलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा असार ४ गते निधन भएको हो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका देवकोटाले नेपालमा जटिल खालका अप्रेसन गरेका थिए ।
असोजमा देशले एक प्राजातान्त्रिक नेता गुमायो । करीब छ वर्ष अघिदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको असोजमा बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको हो । विसं २०४८ सालमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका बाँस्तोला २०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी एवं वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरको कात्तिक १८ गते मस्तिष्काघातका कारण ७८ वर्षको उमेरमा नर्भिक अस्पतालमा निधन भयो । तुलाधर २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारमा श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए ।
उनी२०४२ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवार समेत थिए । पुस ३ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा. तुलसी गिरीको निधन भयो । लामो समयदेखि कलेजोसम्बन्धी रोगका कारण कमजोर बनेका गिरीको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गर्नुपूर्व नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका गिरी त्यसपछि हार्डलाइनर पञ्चका रूपमा चिनिन्थे । ०५९ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उनीले मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिएका थिए ।
यस्तै वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. मोहनराज शर्माको माघ १० गते ८१ वर्षको उमेरमा निधन भयो । समालोचना, नाटक, कथा, कविता, उपन्यास लगायतका विषयमा उनका थुप्रै कृति प्रकाशित छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित कलाकार बिएस राणाको माघ १८ गते ७९ वर्षको उमेरमा निधन भयो । करीब ३० वर्ष बेलायतमा बसेका राणाले त्यहाँ रहँदा विश्वविख्यात साहित्यकार शेक्सपियरका नाटकहरुमा अभिनय गरेका थिए । राणाले विसं २०४१ देखि नेपाली चलचित्रमा पनि अभिनय शुरु गरेका राणाले दर्जनौ चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।
यस वर्ष देशले गुमाएका मध्ये देशका लागि सबैभन्दा बढि क्षति बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारको निधनले भयो । फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीको निधन हुँदा देश नै शोकमा डुब्यो । उक्त दुर्घटनामा परी अधिकारी सहित ७ जनाको ज्यान गयो ।
दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी सहित देशका प्रतिष्ठित व्यापारी आङ छिरिङ शेर्पाको पनि निधन भयो ।
उक्त दुर्घटनामा अधिकारी र शेर्पाका अलावा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक विरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनीयर ध्रुवदास भोछिभोया, मन्त्री अधिकारीका पीएसओ अर्जुनकुमार घिमिरे र क्याप्टेन प्रभाकर केसीको निधन भयो । यो दुर्घटना र निधन यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो क्षतिको रुपमा लिइन्छ ।
नेकपा नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको फागुन १८ गते शनिवार निधन भयो । फोक्सो र मुटुसम्बन्धी समस्याबाट पीडित अधिकारीको धुम्बाराहीस्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । २०५१ सालको कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री रहेका अधिकारी आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ लगायत लोकप्रिय कार्यक्रमका योजनाकार थिए ।
नेपालका छैँटौँ सङ्घनायक भिक्षु अश्वघोष महास्थवीरको चैत महिनामा निधन भयो ।
९४ बर्षको उमेरमा निधन भएका अश्वघोष आठ दशकदेखि बुद्ध दर्शन र साहित्यको प्रवद्र्धनमा लागेका थिए । भिक्षु अश्वघोषका १५० वटा कृति प्रकाशित छन् ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरु मात्रै होइन, अरु केहीको पनि यस वर्ष निधन भयो । तर राष्ट्रका लागि पुर्याएको योगदानका आधारमा सिमिति व्यक्तिहरुलाई मात्र हामीले समावेश गरेका हौँ । वर्ष २०७६ सुरु हुँदै गर्दा ७५ मा जस्तो क्षति बेहोर्नु नपरोस् ।
सत्तारुढ दल नेकपाको एक बर्ष : आन्तरिक विवादमै सिमित
२०७५ सालमा कति भए सडक दुर्घटना ?